Naadiga Al Wasl Oo Shaqadii Ka Eryey Tababare Diego Maradona - iftineducation.com
aadan21 / July 11, 2012
iftineducation.com – Naadiga Al Wasl ayaa ku dhowaaqay in ay shaqadii ka erisey tababarahii kooxda kubbada cagta ee AL Wasl Diego Maradona.
Bogga Twitterka ee naadiga Al Wasl ayaa lagu shaaciyey joojinta shaqadii uu ka hayay tababare Maradona kooxda Al Wasl.
Warar hore u soo baxayay ayaa waxa ay sheegayeen in kooxdan ka dhisan wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta ay eryayaan 51jirkan reer Argentine kadib markii naadigu uu ku guuldareystey in ay guulo ka keenaan tartamadii ay galeen xilli ciyaareedkii la so dhaafay.
Guddiga naadiga Al Wasl ayaa bishii hore beeniyey warar la xiriira inay damacsan yihiin inay shaqada ka eryaan Maradona, balse Maradona ayaa hadda lagu wargeliyey in heshiiskii uu kula joogay kooxda la baabi’yey hal sano kahor xilligii uu dhici lahaa.
Afhayeenka kooxda AL Wasl ayaa u sheegay Sport 360 in markii ay kulmeen madaxda maamulka kooxda Al Wasl talaadada iyagoo qiimeynayay shaqaalaha tababarka kooxda ee uu madaxda ka yahay Diego maradona. Waxayna go’aansadeen in gebi ahaanba laga joojiyo howlihii ay naadiga u hayeen Diego Maradona iyo shaqaalihiisiiba.
Al Wasl ayaa waxaa ay ku dhamaysatay kaalinta siddeedaad tartanka horyaalka UAE halka rigoorayaal loogaga badiyey kulankii finalaha ahaa ee koobka Gulf Clubs Championship. Naadiga ayaa waxaa sidoo kale uu ku haray heerka siddeed dhamaadka tartamada President iyo Emirates Cups.
Maradona ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay tababarida kooxaha sanadkii 2008dii halkaa oo uu xulka Argentine uu horkacayay koobkii adduunka waxana laga eryey tababarida xulka dalkiisa kadib markii lagu soo reebay heerka siddeed dhamaadka tartankii koobka adduunka ee ka dhacay wadanka Koonfur Afrika sanadkii 2010kii.